ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်နေစဉ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ပိုးစွဲကပ်ခံရသူအရေအတွက် စံချိန်တင်မြင့်တက်။ ဥရောပနိုင်ငံကြီးအချို့ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ၊ ည မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်။ ကပ်ရောဂါကျရောက်ချိန် လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရာစုနှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံး ကျန်းမားရေး အကြပ်အတည်း – H2Oupdatenews
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်နေစဉ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ပိုးစွဲကပ်ခံရသူအရေအတွက် စံချိန်တင်မြင့်တက်။ ဥရောပနိုင်ငံကြီးအချို့ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ၊ ည မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်။ ကပ်ရောဂါကျရောက်ချိန် လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရာစုနှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံး ကျန်းမားရေး အကြပ်အတည်း
oungmarine11@outlook.com 26/10/2020	No Comments
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄- နာရီအတွင်း ရောဂါပိုး စွဲကပ်ခြင်းခံရသူ ၅၂,၀၁၀ -ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်း အတည်ပြုလိုက်သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်နေစဉ် စပိန်နိုင်ငံကလည်း ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ရုတ်ချည်းမြင့်တက်လာမှုကြောင့် နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေအနေကျရောက်ကြောင်း ကြေညာသည်ဟု Reuters ၏ သတင်းကို NBC News က ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၃-သန်း ကျော်ဖြစ်နေချိန်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ယခုကဲ့သို့ ရောဂါပိုး စွဲကပ်ခံရသူ ထပ်မံတိုးမြင့်လာခြင်းကြောင့် ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၁-သန်း ၁-သိန်းကျော်ဖြစ်လာသည်။ ပိုးတွေ့သူ ပမာဏတွင် ပြင်သစ်သည် အာဂျင်တီးနားနှင့် စပိန်တို့ကို ကျော်လွန်သွားပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၌ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနှင့် ရုရှားတို့ပြီးလျှင် အမှတ်စဉ် ( ၅ ) သို့ ရောက်ရှိလာသည်။
ပြင်သစ်တွင် မတ်လမှ မေလအထိ ၂-လကြာ Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့ထားစဉ်အတွင်း ကူးစက်မှု ၁၃၂,၀၀၀ ကျော်သာ ရှိခဲ့သည်။ ၃ ရက်၌ ၁၃၉,၀၀၀ ကျော် ထပ်မံတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ရာ သုံးရက်တည်း၏ အရေအတွက်မှာ ယခင် လချီ ပမာဏထက် များစွာကျော်လွန်နေသည်။ ၂၄-နာရီအတွင်း ၁၁၆-ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသူ စုစုပေါင်း ၃၄,၇၆၁ ဦး ရှိကြောင်း ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ပြောဆိုသည်။
အလားတူပင် တနင်္ဂနွေနေ့ စပိန်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကျရောက်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပီဒရိုဆန်ချေ့က ကြေညာသည်။ ကူးစက်ရောဂါတားဆီးရေးအတွက် ဒေသတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့်နှင့် အချို့ဖြစ်စဉ်များအတွက် ဒေသအလိုက် ခရီးသွားလာခြင်းကို တားမြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
တနင်္ဂနွေညမှ စတင်၍ အတည်ဖြစ်သည့် အမိန့်တွင် ကနေရီကျွန်းစုမှအပ ဒေသအားလုံးတို့၌ ညအချိန် အပြင်မထွက်ရအမိန့်နှင့် လူ ၆ ဦး ထက်ပို၍ စုဝေးခြင်းမပြုရန် တားမြစ်လိုက်သည်။ ကတ်တာလိုနီးယားဒေသမှ စ၍ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းအမိန့်တွင် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများအားလုံး ည ၉ နာရီတွင် ပိတ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
အလွန်အမင်း ပြင်းထန်သည့် အခြေအနေနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်က ရှင်းပြသည်။
စပိန်သည် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကာလတွင် အစောဆုံး Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့ခဲ့သည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး နွေရာသီ၌ တင်းကျပ်မှု ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အခြားဥရောပနိုင်ငံများနည်းတူ ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခတ်သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါ အနောက်ဥရောပ၌ ကူးစက်ခံရမှု အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ သောကြာနေ့အထိ စပိန်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးသူ ဦးရေ ၃၅,၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ပေါင်း ၁ – သန်းကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ကိန်းဂဏန်းသည် ထိုထက် ၃-ဆပိုကြောင်း စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်က ဝန်ခံသည့် သတင်းလည်း တွေ့ရသည်။ ( Russia Today., Oct 23, 2020 )
( ယခု သတင်းရေးနေချိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၄၃-သန်းကျော်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူပေါင်း ၁-သန်းကျော်ပြီဖြစ်သည်။ မျက်စိထဲမြင်အောင် နှိုင်းယှဉ်ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၈၀ ရာနှုန်းခန့်ရှိသော လူသားတို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာလည်း ၂-သိန်းကျော်လာပြီဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့ဆီက ပြည်နယ်ငယ်တစ်ခု၏ လူဦးရေထက်ဝက်မျှဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၅-ရက် အမေရိကန်နိုင်ငံ မင်နီယာပိုလိစ်ပြည်နယ်တွင် လူဖြူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းပတမ်းဖမ်းဆီးသဖြင့် လူမည်းအမျိုးသား ဂျော့ဖလွိုက်သေဆုံးသည်။ ထိုမှစ၍ လွန်ခဲ့သည့် ၇-နှစ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သော Black Lives Matter “လူမည်းတို့ ဘဝရှင်သန်ရေးအရေးကြီး” BLM လှုပ်ရှားမှုများ တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသည်။ ၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ပထမဆုံး စတင်တွေ့ရှိပြီး ၄-လ ကျော် အကြာ၌ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် အတိတ်သမိုင်းတွင် လူကို လူချင်း ကိုလိုနီပြု – အင်ပါယာချဲ့ထွင်ခဲ့ဖူးသော သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများသို့ ကူးစက်လျှက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်တွင်မူ BLM သာမက ၎င်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ကြောင်းတူ သံကွဲအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ပြောင်းပြန် ဆန့်ကျင်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးတို့၏ လမ်းပေါ် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများ နိုင်ငံအနှံ့နီးပါး ဖြစ်ပွားသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ဟန့်တားရေး Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်း၊ Social Distancing လူချင်းနီးကပ်မှု ဝေးကွာစေခြင်း ဒေသန္တရအမိန့်များအား ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖီဆန်အံတုသည့် ဆန္ဒပြပွဲများလည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထင်ရှားဆုံး ကူးစက်ဗေဒဆိုင်ရာ ဆေးပညာရှင်နှင့် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ဒေါက်တာ အန်သိုနီဖောက်ချီအား အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။
ရဲစခန်းများ မီးတင်ရှို့ခြင်းနှင့် ဈေးဆိုင်၊ ရှော့ပင်းမောလ်များအား လူစုလူဝေးနှင့် လုယက်ကြစဉ် လက်နက်ကိုင် တပ်အင်အား အသုံးပြု နှိမ်နင်းမည်ဟု သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်မြို့ကြီးအချို့၌ တပ်အင်အား အမှန်တကယ် အသုံးပြုခြင်းလည်း ရှိခဲ့သည်။ ( Telegraph., June 1, 2020 )
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရက်နီး ကပ်နေသော ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ရောဂါကူးစက်မှုတားဆီးရေးကန့်သတ်ချက်များအား ဖျက်သိမ်းရန် တောင်းဆိုနေသူများအား ဟန့်တားခြင်း မပြုယုံမက လွတ်လပ်မှု မြတ်နိုးသူများအဖြစ် အမွှန်းတင်ခဲ့သည်။ အာဏာရှိသူဖြစ်ပါလျှက် တားဆီးမရနိုင်ကြောင်း ဆင်ခြေပေးခဲ့သည်။ ( ABC News., May 22, 2020 ) တရုတ်လက် ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်နေသည်ဟု WHO အား စွပ်စွဲကာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး စတန့် ထွင်ခဲ့သည်။
အကျိုးဆက်အဖြစ် ယနေ့အမေရိကန်သည် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၉-သန်းနီးပါး သေဆုံးသူ ၂-သိန်းကျော်ဖြင့် ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကြွေးကြော်လျှက်ရှိသည့်အတိုင်း “ American First! “ အမေရိကန် ပထမ အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ဗိုလ်စွဲနေပါပြီဟု အတိုက်အခံတို့က ဆိုကြသည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလွန်ကောင်းခြင်း၊ ဆရာဝန်-သူနာပြု-ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ ခေတ်မီလုံလောက် ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ယုံကြည်စိတ်ချသည့် ဆေးပညာရှင်များ၊ ဆေးဝါးနှင့် ကိရိယာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အရဲကိုးကြသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားလာသော အခါ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နှင့် မထိန်းနိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်တို့က ဝန်ခံကြပါသည်။
အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံတို့တွင် ဆန္ဒပြပွဲ အလွန်များသည်။ နေ့စဉ်နီးပါး ဆန္ဒပြလျှက်ရှိကြရာ ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့်၎င်း ဆန့်ကျင်ဘက် အတိုက်အခံများနှင့်သော်၎င်း အဓိကရုန်းဖြစ်ပွားသည်များလည်း တွေ့ရှိရသည်။ လောလောဆယ် သြစတေးလျ၊ အိုင်ယာလန်၊ အီတလီ တို့၌ Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့မှုအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရာမှ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားသည်လည်း ရှိနေသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ရှာလီဟက်ဗ်ဒို ဂျာနယ်၏ ၂၀၁၁-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၀၃-ရက်တွင်ဖော်ပြသော မျက်နှာဖုံးပုံသည် တမန်တော်မိုဟာမက်အား ပြောင်လှောင်စော်ကားသည်ဟု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံများတွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၇-ရက်တွင် ပါရီမြို့ ရှာလီဟက်ဗ်ဒိုမီဒီယာရုံးချုပ်အား သေနတ်သမားတစ်စုတို့က အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ရာ ၁၇-ဦးသေဆုံးပြီး ၁၁-ဦး ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်မှ စ၍ ၎င်းမီဒီယာအား ပိတ်ထားခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်တွင် ရှာလီဟက်ဗ်ဒိုမဂ္ဂဇင်းအား ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်။ ထိုအတွက် နိုင်ငံတကာရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစု နိုင်ငံများ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးရေး ကန့်သတ်ချက်များကို ဖီဆန်လျှက် လူပေါင်း ထောင်သောင်းချီ စုဝေးကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ပင် အသက် ၄၇ -နှစ်အရွယ် ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက အဆိုပါ ရှာလီဟက်ဗ်ဒိုကာတွန်းကို ကျောင်းစာသင်ခန်းတွင် ကျောင်းသားများအား အချေအတင် ဝေဖန်မှုပြုစေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အသက် ၁၈-နှစ်အရွယ် ချေချင်းမျိုးနွယ် အဗ္ဗဒူလာအန်ကိုဇီက ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ပါရီမြို့ “ ပလာဒီ လာရီပတ်ဘလီကီ “ နန်းတော်ရှေ့မှောက်တွင် သေဆုံးသူ ကျောင်းဆရာ ဆင်မြူရယ်ပက်တီအတွက် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပရာ လူပေါင်း သိန်းချီတက်ရောက်သဖြင့် ပြင်သစ်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အလားတူ ပြင်သစ်မြို့ကြီး ၆-မြို့၌ စုဝေးခဲ့ကြသည့် ထို့နေ့မှာ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် တနင်္ဂနွေဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တ ၁-ပတ်နီးပါးအကြာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ယခုကဲ့သို့ ၁-ရက်တည်း လူ ၅-သောင်းကျော်၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း အမြင့်ဆုံးအရေအတွက် အဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( NBC News., Oct. 26, 2020,” France hits record 52,010 daily Covid cases, Spain declares new state of emergency. By Reuters” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာ သာပြန်ဆိုသည်။ ဖြည့်စွက်ပါအချက်အလက်များ ရယူသည့် သတင်းများအား Links ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ )))
Previous Previous post: ရဲများ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အဆုံးသတ်ရန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရာမှ နိုင်ဂျီးရီး ယား၌ ပြန်ပေးဆွဲ-အကြမ်းဖက်-လူသတ်-ဂိုဒေါင်ဖောက်-အများပိုင်ပစ္စည်း ဖျက်ဆီးခြင်းများ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိ ။ ရဲနှင့် စစ်သားအပါအဝင် အရပ်သားအများစု ၆၉-ဦး သေဆုံး
Next Next post: တူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးအား ပြင်သစ် ပြန်လည်ခေါ်ယူ၊ ပြင်သစ်သမ္မတအနေဖြင့် မွတ်စလင်များအပေါ် သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသင့်ကြောင်း တူရကီအကြံပြု။ ရှာလီဟက်ဗ်ဒိုကာတွန်း ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသည့် ကျောင်းဆရာနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်